Bluetooth ammaan Self Dheelitirka Gaadhi curyaanku - Jomo Technology Co., Ltd
Inkastoo, mid ka mid ah siyaabaha aad u fiican yahay si ay u iibsadaan ka iibiyaha ah oo dhab ah oo si fiican u-sharfay burin rajada dhacdooyinka dambe oo caynkaas ah. Sidaas ma waxaad waayi doontaa hab oo ma aha inay ka welwelin badan ee ku saabsan gaadiidka socota. The 2 Wheel Dheelitirka Scoote r by nolosha batteriga Powerboard`s sax tahay, oo aad noqon doonaa ankii la cutubkan waqtiyada oo dhan sida xunna. Waxaad tegi karo mooto ah taas oo uu leeyahay tusiyaha batari ku sugan si aad u aragto heerka awoodda batteriga. Eeg maarmaanka ADA for Curyaanka, Mobility Aids, iyo kale Energy-riixay Mobility darbi oo aad halkan ka akhrisan kartaa. Sidaas bartaan 8.5inch Smart Balance mooto Bluetooth hoverboard weyn guudmar giraangiraha K7 halkan ka hor adeeganayay waxaa loogu talagalay. Halkan video fiican qiimeynta koobaya tiro ka mid ah tani. On dulsaar in fashion, waxaan kugu xiri on qeybiyaha ka dib markii aad wax ku bartaan oo ku saabsan muuqaalka guud ee aan soo ururiyey oo waxay kugu xiri doontaa in shirkadaha gudahood Maraykanka
Haddii aad rabto oo keliya in ay ka faa'iideystaan mooto ee firaaqada gaar hoverboard is miisaamid intii ku filnayd weyn doono. Sidoo kale, mootooyinka waa dhul dhan, oo waa inaad iyaga ka faa'iideysan dhoobada, baraf, jidadka iyo meelaha ciid. Marka hore, hoverboard is miisaamid k7 waa giraangiraha weyn 8.5inch iyo off-road taas oo ku haboon xeebta saaran gaadiid. Sidaas waxa uu leeyahay waayo-aragnimo saaran gaadiid wanaagsan. Marka labaad, matoorrada 500W, awood xoog leh. Mar saddexaad, nidaamka motherboard dual, kor u qaadista heerka wax soo saarka iyo iibka ka dib. Ka sokow, waa hab gaar ah oo leh muuqaalka gaar patent, more gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, kooxda gacanta ku dooday in shaqada gacanta kula xildhibaannada oo leh ujeedo ah sharciyeeyaa isticmaalkooda. Haddii aad mid ka mid ah iibsan? Sidaas, ka hor inta aadan iibsan hoverboard a hubiyo in ay batari waxaa ku ool ah oo lagu ilaaliyo iyo yimaado maamulka fiican iyo unit ku amraya. Ma maray Ul2272 cadeynayaa?
Powerboard The by Hoverboard laga yaabaa in ay u badan tahay ee mootooyinka is-dheelli ugu qaali ah halkaas oo qof kasta su'aal ee la duldhigay uu yahay: "Ma qiimaha qiimaha? The Koowheel isku dheelli qiimaha mooto waa mid aad u macquul ah .Dhab ahaantii, Koowheel ma sameeyo alaabta oo tayo yar yahay ammaanka macaamiisha ee. Waa xulashada fiican haddii ay jiraan badan tahay waxay noqon doontaa kids yar waxa ay fuushan. The Self-Dheelitirka mooto K8 by KOOWHEEL waxaa laga yaabaa in aad u fudud in ay isticmaalaan, waxa keliya ee aad u baahan tahay inaad ku kalsoonahay in aad awoodaan inay ceshato wax halka fuushan on board this noqon doontaa. Astaamaha:
Hoverboard K8 loogu talagalay in Milan, waxa ay asal ahaan suuqa EU kartoo
design xamili Qarsoon, si sahlan loo qaadi
Off design wheel wadada, si fudud u qabsadaan indhaha ka mid ah lagu daydo celcelis
miisaanka Slim iyo Nuur
Khadadka Green on Baydalka
Waa maxay faa'iidooyinka ay leedahay?
Koowheel ma sameeyo alaabta oo tayo hooseeyo
Hoverboard K8 weli heerka tayada Top
Isticmaal oo keliya qeybiyeyaasha Top waayo, PCB, Motor, xeedho
The hoverboard 6.5inch 24V ugu kalsoonaan karo
Battery kulmay dhammaan heerarka ammaanka
Heerka ugu hooseeya haleysan
Sidaas daraaddeed, this is miisaamid mooto uu leeyahay mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee ammaanka fuula. Markaas ku riday mid ka mid lugta on swegway ah. Waayo, kuwa doonaya wax ku ool ah oo diyaar u ah inay bixiso qiimo, ka dibna ay tani tahay doorashada ugu fiican.